UNGAZICWANGCISA NJANI IINJONGO ZOBOMI BAKHO KWAYE UZIFEZEKISE - UKUFUMANA IINJONGO
Ungazicwangcisa njani iiNjongo zoBomi bakho kwaye uzifezekise
Ufuna ukuba phi kwiminyaka emi-5 ukusukela ngoku, iminyaka eli-10 ukusukela ngoku, okanye nakweli xesha lonyaka uzayo? Ezi ndawo ziinjongo zakho zokufikela kwaye nangona ungazi ukuba awufuni kuma endaweni enye njengoko unjalo ngoku, akusoloko kulula ukubona ukuba zeziphi iinjongo zakho zokwenyani.
Uninzi lwabantu lucinga ukuba ukuseta indawo yokufikela usukelo liphupha elikhoyo kwikamva elikude kodwa elingasokuze lifumaneke. Oku kungqina ukuzenza ngokwakho ukuprofeta ngenxa yezinto ezimbini:
Okokuqala, ukuba injongo ayichazwanga ngokuthe ngqo kwindawo yokuqala; Okwesibini, lihlala liliphupha elikude lilindele inyathelo elingaze lithathwe.
Ukuchaza indawo oya kuyo yindawo ekufuneka uyithathile ixesha lokucingisisa ngayo. La manyathelo alandelayo endlela yokucwangcisa iinjongo zakho zobomi kufuneka ukuba uqalise kuhambo oluya kwindawo oya kuyo.
1. Yenza uLuhlu lweeNjongo zakho zokuFikela
Iindawo ekujoliswe kuzo zizinto ezibalulekileyo kuwe. Elinye igama kubo iya kuba ngamabhongo, kodwa amabhongo avakala ngathi yinto engaphandle kokubamba kwakho, ngelixa iindawo ekujoliswe kuzo ngokuqinisekileyo zinokufezekiswa ukuba ukulungele ukubeka umgudu osebenzela kubo.Intengiso
Ke ngokwenene ufuna ukwenza ntoni ngobomi bakho? Zeziphi ezona zinto zibalulekileyo onqwenela ukuzenza ngobomi bakho? Yintoni onokuzisola ngayo ukuba ungayenzi ukuba ngequbuliso ufumene ixesha elilinganiselweyo emhlabeni?
Nganye kwezi zinto lusukelo. Chaza indawo nganye oya kuyo kwisivakalisi esinye.
Ukuba naziphi na kwezi njongo lilitye lokunyathela liye kwenye yeenjongo, yikhuphe kolu luhlu njengoko ingeyiyo indawo ekuyiwa kuyo.
2. Cinga ngeXesha leXesha ukuze ufeze iNjongo
Kulapho unyaka we-5, unyaka we-10, isicwangciso sonyaka olandelayo singena kuso.
Funda umahluko phakathi kwe ixesha elifutshane injongo kunye injongo yexesha elide . Ezinye iinjongo ziya kuba nobomi beshelufu ngenxa yobudala, impilo, ezemali, njl, ngelixa ezinye ziya kuba kuwe ukuba ufuna ukuzenza nini ngazo.Intengiso
3. Bhala phantsi iinjongo zakho ngokucacileyo
Bhala indawo nganye oya kuyo phezulu kwiphepha elitsha.
Kwinjongo nganye, bhala ukuba yeyiphi na into oyifunayo kwaye ungenayo ngoku eya kukuvumela ukuba ufezekise loo njongo. Oku kunokuba luhlobo oluthile lwemfundo, utshintsho lomsebenzi, ezemali, isakhono esitsha, njlnjl. Ukuba naziphi na kwezi njongo zincinci zineenjongo ezingaphantsi, hamba kwinkqubo efanayo nezi ukuze ube namanqaku omsebenzi oza kusebenza nawo.
4. Bhala phantsi Okufuneka ukwenze kwiNjongo nganye
Ngaphantsi kwento nganye edwelisiweyo, bhala phantsi izinto oza kuyenza ukuze ugqibezele inyathelo ngalinye elifunekayo ukuze uzalise injongo.
Ezi zinto ziya kuba luluhlu lokutshekisha. Ziyindlela ebonakalayo yokujonga ukuba uqhubela phambili njani ukufikelela kwiindawo oya kuzo. Ingxelo yempumelelo yakho!
5. Bhala Ixesha Elibekelwe Ixesha Lakho Ngemihla Engqalileyo Neyinyani
Usebenzisa amaxesha owenzileyo, kwiphepha ngalinye lendawo oya kuyo bhala phantsi unyaka oza kugqiba ngawo injongo.Intengiso
Ngayo nayiphi na injongo engenawo umhla wokugqitywa, cinga malunga nokuba ungathanda ukuyifeza nini kwaye uyisebenzise njengomhla wokuya kwakho.
Sebenza kumaxesha abekiweyo kwindawo nganye ekujoliswe kuyo, yenza inqaku lemihla yokwenyani oya kuthi ugqibezele inyathelo ngalinye elincinci kuyo.
6. Cwangcisa ii-To-Dos zakho
Ngoku thatha isishwankathelo sazo zonke iinjongo zakho kunye nokwenza ishedyuli yento ekufuneka uyenzile kule veki, kule nyanga, kulo nyaka -ukuqhubela phambili kwindlela eya kwiindawo oya kuzo.
Bhala la manqaku eshedyuli, unemihla oza kwenza ngayo izinto.
7.Sebenzisa iNkqubo yokuSebenzisa iReticular ukuze ufumane iNjongo yakho
Funda kule vlog yeLifehack ukuba ungayigqobhoza njani ingqondo yakho ngeNkqubo yokuSebenza ngokuQinisekayo (iRAS) kwaye ufikelele usukelo lwakho ngokufanelekileyo:Intengiso
Ukuphonononga inkqubela-phambili yakho
Ekupheleni konyaka, uphonononge okwenzileyo kulo nyaka, phawula izinto ezikuluhlu lwezinto ekufuneka uzijongile kwaye ubhale ishedyuli ngamanqaku omsebenzi owadingayo kunyaka olandelayo.
Nangona kungakuthatha iminyaka eliqela ukuya, umzekelo, ukufumana inkuthazo oyinqwenelayo kuba kuqala kufuneka ufumane i-MBA oko kuthetha ukufumana umsebenzi ngemali ethe kratya yokukuvumela ukuba uxhase ikhosi yesidanga esisigxina, ekugqibeleni uya kuphumelela ekufezekiseni indawo oya kuyo ngenxa yokuba ungacwangcisanga hayi kuphela into oyifunayo, kodwa uyifumana njani, kwaye ubusebenzela ukufikelela kuyo.
Iingcebiso ezingakumbi zokufezekisa iinjongo
Imigaqo emi-6 yegolide yokwenza inkqubela phambili ekufezekiseni iinjongo
Ungazicwangcisa njani iinjongo zakho kwaye uzifezekise ngaphandle koxinzelelo
Kutheni ukuba nesiCwangciso seNjongo sikunceda ukuba ufezekise ngakumbi
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: UDebby Hudson nge unsplash.com
Iindawo ezili-10 eziphezulu zokundwendwela ngaphambi kokuba ufe
yintoni eyenza umntu abe yindoda
ndifuna ukutya ntoni
sithini isifundo sobomi
ingakanani i-bandwidth eyimfuneko kwiwebhusayithi yam
Abahlobo Iteknoloji Iincwadi Uyilo Imfundo Yabantwana